Anthology Udinga Ukuze Speed - omunye anthologies best of sonke isikhathi!
Amakhompyutha, Imidlalo yama-computer
Anthology we Isidingo umdlalo Ukuze Speed waqala nomlando wayo kuze kufike emuva 1995. Umdlalo kuqala ezikhishwe kulolu chungechunge kwaba Road & Track Presents: Isidingo Speed - racing game athuthukiswe futhi enyatheliswa Electronic Arts Canada. Kuyinto nale game futhi waqala yimpumelelo crazy yochungechunge. Useke iwine izihloko ezingaphezu kuka-nanhlanu ngokuwina zomhlaba game. Umdlalo into entsha ngempela futhi enamandla ngesikhathi sawo.
Enye legend, okuyinto wawuyingxenye Anthology Isidingo Ukuze Speed, Underground bekuwumdlalo ngo-2003. It wabutha wonke izimoto wesikhathi enamandla kakhulu, elikhanyayo futhi entsha. Lo mdlalo nje ithumba dynamism kanye nemibala, ihluzo eyenzelwe kahle okuvumela umdlali ukucabanga ukuthi emhlabeni wangempela. Ngokwemvelo, umdlalo unekhono uthuthukise imishini. Ukunqoba uhlanga, uthola omkhulu cash imiklomelo ukuthi isetshenziswe kanjani ukuba esikhundleni ingaphandle imoto nasekuthuthukiseni izinga layo.
Omunye umdlalo edume ukuthi agcwaliswa Anthology Udinga Ukuze Speed, - Carbon 2006. Lapha, onjiniyela ungeze okokuqala amaphoyisa: lesi sici yomdlalo ulunika drive futhi heightens umqondo adrenaline egazini. Futhi wanezela izimoto ezintsha, okuyinto ungakwazi ukulawula. Into esemqoka - musa ukuwela ezandleni zamaphoyisa.
Omunye umdlalo Anthology Udinga Ukuze Speed - Most Wanted: Black Edition okufanayo ngo-2006. Sekuvele kukhona ajwayelekile steel izinceku ezinonya yomthetho, kuba izimoto engacabangeki ezibizayo futhi intombazane ngobuhlanya enhle. Imiphumela engokoqobo yokwenza umhlaba yamahhashi waphinda ihlehlise umdlalo.
Ngo-2008, iqoqo Isidingo Ukuze Speed agcwaliswa nomunye ithoyizi cool - Undercover. okhiqizwayo seliphinde yashaya izwe umdlalo. Ngu isiko kukhona ngendlela emangalisayo izimoto pricey, amaphoyisa uthukuthele ongeke zisale ngemuva kwakho, uma ukuwuchitha. Kholwa, futhi kuyomelwe uwaphule! Futhi, kukhona kakhulu ihluzo kuyofikwa, okuyinto liseduze kakhulu ngokoqobo. Ithoyizi nje kulabo asesabi nezivinini omkhulu futhi drive esingakhulumekiyo. Ngaphezu kwalokho, umonakalo kuzokwenza inkomba ukubonakalisa ngaphambi ram nezinye izimoto.
Futhi lokho sajabula Anthology Isidingo Ukuze Speed 2013? Hawu, lokhu ngempela udaba olwehlukile. brainchild okusha nesaba ithoyizi izimbangi. Kumane okuthile. 100% ihluzo Okuyınqo, izimoto umsindo aphakeme - indaba ohluke ngokuphelele, konke kahle. Ngikweluleka ukudlala hhayi kuphela ikhibhodi on aduduze ekhethekile (amasondo ayo, ahamba ngebhayisikili futhi earphone) ezokwenza umdlalo nje ongenakulibaleka. Kuyoba ukukunikeza isizukulwane esisha uhlanga. Zizwe idrayivu yangempela futhi ijubane umdlalo esheshayo futhi ashukumisayo kakhulu sibonga wonke ukuba Frostbite 3.
Uzokwazi ubuhlanga nge ezihlukahlukene izimo zezulu: iqhwa, isichotho, imvula, umoya, inkungu ngisho iziphepho zesihlabathi. Khumbula, ukuthi udala ukuma kanye namandla we imoto. Shintsha umbala upende, amasondo, umzimba kits nakho konke ngaphakathi. Ungenza imoto yakho eyingqayizivele emhlabeni! Futhi omunye touch nice. Uma ufuna amaphoyisa wadida hhayi kuphela ekubukekeni kodwa futhi ekutheni une inambapleti, nje ukulishintsha!
Ngakho, lapho ifingqa, kuyafaneleka ukuthi yimiphi ethandwa umdlalo uchungechunge NFS - i ethengwa kakhulu eliphelele ngesikhathi sako. Le mpumelelo uyahlanya kungawufinyelela ubunye imidlalo PC kuphela. Le mpumelelo kungenxa ihluzo emihle kakhulu, okuthakazelisayo futhi ngezinye izikhathi lwendaba ethakazelisayo, futhi-ke, izimoto cool! Konke lokhu - Isidingo Anthology Ukuze Speed.
Idlalwa kanjani i-umalugaju e "CS: GO"? Imithetho umdlalo, udala ukuguqulwa
Indlela yokwenza Ipiki ku "Maynkraft" - ukufunda ukwakha izinto
Franchesko Patstsi: incazelo uhlamvu
Pokevision: Analogue and izinkonzo ezifanayo
"Izingelosi Amademoni." Abalingisi kumdlalo
I-WPS - iyini nokuthi ingayilungisa kanjani? Ungayilungiselela kanjani i-WPS ku-router?
Imisebenzi ekhethiwe. I-Anthology - iyini?
UJohn Hughes: I-Filmography ne-biography
Indlela ukukhetha ikhompyutha ibhayisikili? Qhathanisa amakhompyutha ibhayisikili Sigma Ezemidlalo, BRI, VDO, Assize, Cateye. ibhayisikili ikhompyutha ukucushwa Proper
Ukukhiqizwa inkampani Planeta ORGANICA: ukubuyekezwa, izinzuzo
Funisisa izinwele (isitayela): incazelo, indlela Ukukhetha kanye nokusetshenziswa
Nakekela ukukhokha futhi, nodumo ebusheni bakhe: ukubaluleka izaga kanye izimo sokusebenza kwawo
Kungani eminweni amanzi wakhwinyisa: ukusabela komzimba ukuze umswakama
Isikhathi esihle sewundlu: izindawo eziwusizo, izincomo kanye nezici zokupheka
Bone njengoba iyingxenye: isakhiwo, izakhiwo, imisebenzi,